'' Recordar 'နဲ့' Olvidar '' အများစုမှာဘုံ
သတိရခြင်းနှင့်မေ့လျော့ခြင်း၏အသုံးအများဆုံးစပိန်ကြိယာအသီးသီး recordar နှင့် olvidar ဖြစ်ကြသည်။
Recordar: ဒီနေရာမှာအသုံးပြု recordar အချို့ကိုဥပမာဖြစ်ကြသည်။ ဖြစ်လာသည့်ပင်စည်၏အခြားစကား - ၏ပုံစံကိုအောက်ပါကြောင့် irregularly conjugated ကြောင်းသတိပြုပါ။
Recuerdo Que nuestro equipo ခေတ် impresionante ။ ကျနော်တို့အဖွဲ့ကမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ခဲ့သည်ဆိုတာသတိရပါ။
¿ Ya မျှ recuerdas cuando un niño Eraser? သငျသညျကလေးတစ်ဦးအဘယ်မှာရှိတဲ့အခါသင်နေဆဲသတိရကြသည်မဟုတ်လော
Firefox ကိုအဘယ်သူမျှမ quiere recordar mis contraseñas။ Firefox ကိုကျွန်မရဲ့ passwords ကိုမှတ်မိချင်ပါဘူး။
အဘယ်သူမျှမ recuerdo donde fue မိုင် primer beso ။ ကျွန်မရဲ့ပထမဦးဆုံးနမ်းခဲ့ဘယ်မှာငါမအောက်မေ့ပါဘူး။
Siempre recordaremos te ။ ကျနော်တို့ကအမြဲသင်မှတ်မိပါလိမ့်မယ်။
အင်္ဂလိပ်: Recordar ဆိုလိုတာကလက်တင် recordari မှလာ "မှတ်မိဖို့။ " စိတျနှလုံးအ memory နဲ့စိတ်ခံစားမှု၏ဗဟိုအဖြစ်ယူဆထားပြီးအဖြစ်စိတ်ဝင်စားစရာ recordar "နှလုံး" ဆိုလိုတာကနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုcorazónတစ်ဝမ်းကွဲဖြစ်ပါတယ်။
မမှန်သော-မိတျဆှေ သတိပေးချက်: အင်္ဂလိပ်ထံမှဆင်းရဲသားကိုဘာသာပြန်ချက်များကိုအတွက် မှလွဲ. , recordar "စံချိန်ဖြစ်သည်။ " အဓိပ်ပာယျအဘို့မသုံးနေသည် ကြောင်းရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုကြိယာ anotar (ရေးချဖို့) နှင့် grabar (အသံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်စေ) တို့ပါဝင်သည်။
Acordarse က de: ဒါ့အပြင်လေ့ "သတိရဖို့" ဘို့အသုံးပြုသောဖြစ်ပါတယ် reflex ကြိယာ ကနောက်တော်သို့လိုက် acordarse ဝိဘတ် က de ။ သငျသညျမှန်းဆကြလိမ့်မယ်အဖြစ်, acordarse လည်းcorazónတစ်ဝမ်းကွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစ recordar ကဲ့သို့တူညီသောပုံစံကိုအောက်ပါ conjugated ဖြစ်ပါတယ်။
ငါ့ကို acuerdo de la brisa Que nos acariciaba ။ ငါကျွန်တော်တို့ကိုခြော့မယ်လို့သောလေပြေသတိရပါ။
¿ por Que တစ် veces nos acordamos က de lo Que soñamos y က otras veces မျှ? ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့မဟုတ်အဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုကျွန်တော်အိပ်မက်မက်နှင့်အခြားကြိမ်သတိရသလဲ?
la respuesta cortaala pregunta es မျှမရှိ se acordaron က de nosotros ။ မေးခွန်းဖို့တိုတောင်းသောအဖြေကိုအဘယ်သူမျှမပါ, သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုမအောက်မေ့ဘဲ။
အဘယ်သူမျှမ quiero acordarme က de Ayer ။ မနေ့ကငါမှတ်မိဖို့မလိုချင်ကြဘူး။
Rememorar: စပိန်တစ်ဦးမ cognate "သတိရ" rememorar ၏, သို့သော်ဖြစ်ရပ်တစ်ခု memorialized သို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့ကိုရည်ညွှန်းဖို့များသောအားဖြင့်ထို့နောက်အလွန်မကြာခဏအသုံးပြုကြသည်မဟုတ်, ဖြစ်ပါတယ်: Presidente ကော်ရဲရားrememoró la masacre del2က de agosto ။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကော်ရဲရားသြဂုတ်လ2အစုလိုက်အပြုံလိုက်သတ်ဖြတ်မှုကိုအောက်မေ့တော်မူ၏။
Olvidar: Olvidar ဆိုလိုတယ်ကြောင်းဘုံအသုံးပြုမှုအတွက်သာကြိယာက "မေ့လျော့ဖို့။ " ဒါဟာတခါတရံတမင်မေ့အကြံပြု "olvidarse က de," ရာနိုင် (သို့သော်အမြဲမ) မကြာခဏထားသောစာပိုဒ်တိုများထဲမှာ, reflex form မှာအသုံးပြုသည်။ အချို့ဒေသများမှာက de မပါဘဲ olvidarse ဘုံဖြစ်ပါတယ်။
el estilo Que los había distinguido olvidaron los စပါး။ အဆိုပါစပါးသူတို့ကိုခွဲခြားသောစတိုင်မေ့လျော့ကြ၏။
¡Ayúdame! Olvidéမိုင်contraseñaက de, Hotmail ။ ကူညီပါ! ငါသည်ငါ၏, Hotmail စကားဝှက်ကိုမေ့လျော့ကြ၏။
အဘယ်သူမျှမ voy တစ် olvidar nunca မိုင် visita တစ်ဂါ။ ငါဂါငါ့အလည်အပတ်ခရီးဘယ်တော့မှမေ့လိမ့်မယ်။
ငါ့ကိုolvidaré Que fuiste mío y က Que ahora te perderé။ ငါသည်သင်တို့ကိုသတ္တုတွင်းနှင့်ယခုသင်တို့ကိုငါမဆုံးရှုံးလိမ့်မည်ဟုဖြစ်ကြောင်းမေ့လျော့ပါလိမ့်မယ်။
¿ por Que nos olvidamos က de fechas importantes? ငါတို့သည်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသောရက်စွဲများမေ့လျော့ကြသလော
¡အဘယ်သူမျှမ nuestro lo olvidemos! ရဲ့ငါတို့ဘာကိုမမေ့မလြော့ပါစေ!
မကြာခဏ olvidarse နိုင်ပါတယ် gustar တူသောလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် , ထိုအတွက်မေ့လျော့ရာကြိယာ၏ဘာသာရပ်ဖြစ်လာသည်နှင့်မေ့လျော့သူ (များ) ကိုဖြစ်လာ သွယ်ဝိုက်အရာဝတ္ထု :
es un ကိုဗီဒီယို Que မျှ se te olvidará nunca ။ ဒါဟာသင်ဘယ်တော့မှမေ့လိမ့်မယ်ဗွီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ (လီတာ, သင်ဖို့မေ့လျော့ခြင်းကိုဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုဗီဒီယိုတစ်ကားကိုဖွင့်။ )
un DIA se ငါ့ကို olvidaron Las llaves del carro ။ တစ်နေ့မှာတော့ငါကကားသော့မေ့လျော့ကြ၏။
el coche en el olvidó se ငါ့ကို y ကိုငါကားရေဆေးအတွက်ကားတစ်စီးကိုမေ့ခြင်းနှင့်က6မှာပိတ်ထားတဲ့ Las 6. cerraba autolavado ။
အင်္ဂလိပ်: Olvidar ထိုသို့သော "ထိုက်သည်အတိုင်းအပြစ်ပေး" နှင့်အဖြစ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးများ၏တစ်ဝမ်းကွဲအောင် "မေ့လျော့" လကျတငျ oblitus မှလာ "မေ့မေ့လျော့လျော့။ "
သတင်းရင်းမြစ်: ဤသင်ခန်းစာတွင်အသုံးပြုသတင်းရင်းမြစ် Fotolog.com, Devocionalies Cristiano, Internetizado.com, ဣဇာက် Arriola, la Voz က de ဂါလီ, Soyunalbondiga.com, Mi Rincón del Alma, Taringa.net, Tenisweb, Terra.com, Ubuntu ကို-es ပါဝင်သည်။ org နှင့် 3wilio ။
'' တှကေအသငျ့ '' နှင့်အတူပြင်သစ် Idiomatic ဖော်ပြချက်
'' ဟာရီကိန်း '' ၏အင်္ဂလိပ်
ပြင်သစ်တွင် "Pluerer" (Cry မှ) ၏ conjugation Learn
ဂျပန် '' နာနီ '' ၏အဓိပ္ပာယ်
ပြင်သစ် Expression '' CA Marche '' အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
La Declaraciónက de Independencia
အဆိုပါ Gap ဂီတလှုပ်ရှားမှုထဲမှာဖြည့်ပါ
ဂျာမန်နံပါတ်များနှင့် 21-100 ရေတွက်
ပြင်သစ်တွင် "Se Taire" (Quiet Be မှ) Conjugate လုပ်နည်း
ရှိတ်စပီးယား 400 နှစ်ကျော်ကြားသည်ရောက်ဖူးရဲ့
High School တွင်ကျောင်းသားများအဘို့ကြီးသောနွေရာသီခေါင်းဆောင်မှု Programs ကို
တစ်ဦး 460cc ယာဉ်မောင်းနှိပ်ဖို့4သော့ချက်များ
အဘယ်အရာကိုဌာနအချိုးနည်းလမ်ဖို့ကျောင်းသား (နှင့်အဘယ်အရာဒါဟာမဟုတ်) ကိုလေ့လာပါ
ပြင်သစ် Valentine Day ကိုရိုးရာဓလေ့: လွယ်ကူဘာသာစကားနှစ်မျိုးပုံပြင်
Adobe Acrobat (PDF) ဖိုင်များတစ် Delphi လျှောက်လွှာအတွက်သုံးပါ
စိန့်လူးဝစ်အဆင့်လက်ခံရေး၏ Maryville တက္ကသိုလ်
အီတလီကြိယာ conjugation: Svegliare
သမိုင်းမှတဆင့် Play ပိတ်ပင်ထား
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက် Molecular ဖော်မြူလာ
သင်ကဂေါက်သီး Play ဖို့လက်အိတ်ဝတ်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါသလား?
ထိပ်တန်း Jason Aldean သီချင်းများ
ဟိန္ဒူ Diwali ပွဲများအတွက်ဆုတောင်းချက်ဓမ်မတေး (Aarti)
တစ်ဂီယာ Cooler ကို Install လုပ်နည်း
Ciudadaníaရေိ por padre ဏ Madre ဏ derecho က de sangre